သူငယ်ချင်းအဓမ္မကျင့်ခံနေရသည့် ဗွီဒီယိုကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ LIVE လွှင့်ခဲ့သည့် ကောင်မလေး - APANNPYAY MEDIA
Home / နိုင်​ငံတကာသတင်း / သူငယ်ချင်းအဓမ္မကျင့်ခံနေရသည့် ဗွီဒီယိုကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ LIVE လွှင့်ခဲ့သည့် ကောင်မလေး
သူငယ်ချင်းအဓမ္မကျင့်ခံနေရသည့် ဗွီဒီယိုကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ LIVE လွှင့်ခဲ့သည့် ကောင်မလေး
Apann Pyay 10:59:00 PM နိုင်​ငံတကာသတင်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Columbus, Ohio မှာ နေထိုင်တဲ့ Marina Lonina (19)နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးဟာ သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကို အမျိုးသားတစ်ဦးက အဓမ္မကျင့်တဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးကာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ Live လွှင့်ခဲ့တဲ့အတွက် ထောင်ဒဏ်9လ ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဓမ္မကျင့်ခံရတဲ့ အသက် 17 နှစ်အရွယ် သူငယ်ချင်းဟာ ထိုစဉ်က အရက်အလွန်အကျွံမူးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီအဓမ္မမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Lonina ဟာ ပူးပေါင်းကျူးလွန်သူတစ်ယောက်အဖြစ် စွဲချက်တင်ခံရပြီး၊ သာမန်ဆို ထောင်ဒဏ်အနှစ် 40 ကျခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကို စွဲထားတဲ့ စွဲချက်တွေထဲမှာ မုဒိမ်းမှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ လိင်ပိုင်ဆိုင်းရာ အတင်းအကြပ်ချုပ်နှောင်စော်ကားမှုတွေနဲ့ အမှုဖွင့်ခဲ့ပေမယ့် တရားခံ Lonina ဘက်က ချေပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဓမ္မကျင့်ခံရတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကို ဖော်ပြခြင်းမပြုဖို့ တရားရုံးက တားမြစ်ထားပြီး၊ သူမ အဓမ္မကျင့်ခံရတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ဆိုရှယ် App ဖြစ်တဲ့ Periscope မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလက ဖြန့်ဝေခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဗွီဒီယိုကို Lonina က မိမိဖုန်းနဲ့ စိတ်ကြိုက်ရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓမ္မကျင့်ခံရသည့် ကောင်မလေးက အခုဆို အသက် 18 နှစ် ပြည့်ပါပြီ။ သူမက ” ကျွန်မရဲ့ အားနည်းချက်က လူတစ်
ယောက်ကို ခဏချင်းမှာပဲ အပြည့်အ၀ ယုံကြည်မိတာပဲ … သူတို့က ဒီအချက်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချသွားတာပါ “လို့ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ပြောပါတယ်။ အဓမ္မကျင့်ခဲ့တဲ့ အသက် 29 နှစ်အရွယ် အမျိုးသား Raymond B. Gates ကိုလည်း ထောင်ဒဏ်9နှစ် ချမှတ်ထားပြီးပြီလို့ သိရပါတယ်။
တရားခံ Lonina အပါအ၀င် အဓမ္မကျင့်ခံရသည့် ကောင်မလေးတို့ဟာ Gates နဲ့ ခင်တာ မကြာသေးဘဲ၊ ဈေးဝယ်ထွက်ရင်း ဆုံးဆည်းရာကနေ ခင်မင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်နေ့မှာ Gates က သူမတို့နှစ်ယောက်ကို အိမ်ကို ဖိတ်လိုက်ပြီး၊ သောက်စားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ အမူးလွန်နေတဲ့ ကာယကံရှင်ကို Gates က အဓမ္မကျင့်ခဲ့ပြီး၊ ဒါကို Lonina က တဟီးဟီးတဟားဟားနဲ့ ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးကာ အင်တာနက်ပေါ်ကို Live လွှင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမရေိကနျပွညျထောငျစု Columbus, Ohio မှာ နထေိုငျတဲ့ Marina Lonina (19)နှဈအရှယျ ကောငျမလေးဟာ သူမရဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈသူကို အမြိုးသားတဈဦးက အဓမ်မကငျြ့တဲ့ ဗှီဒီယိုဖိုငျကို ကိုယျတိုငျရိုကျကူးကာ အှနျလျိုငျးပျေါမှာ Live လှငျ့ခဲ့တဲ့အတှကျ ထောငျဒဏျ9လ ခမြှတျခံခဲ့ရပါတယျ။ အဓမ်မကငျြ့ခံရတဲ့ အသကျ 17 နှဈအရှယျ သူငယျခငျြးဟာ ထိုစဉျက အရကျအလှနျအကြှံမူးနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
ဒီအဓမ်မမှုနဲ့ပတျသကျပွီး Lonina ဟာ ပူးပေါငျးကြူးလှနျသူတဈယောကျအဖွဈ စှဲခကျြတငျခံရပွီး၊ သာမနျဆို ထောငျဒဏျအနှဈ 40 ကခြံရမှာ ဖွဈပါတယျ။ သူမကို စှဲထားတဲ့ စှဲခကျြတှထေဲမှာ မုဒိမျးမှု၊ အကွမျးဖကျမှု၊ လိငျပိုငျဆိုငျးရာ အတငျးအကွပျခြုပျနှောငျစျောကားမှုတှနေဲ့ အမှုဖှငျ့ခဲ့ပမေယျ့ တရားခံ Lonina ဘကျက ခပြေနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အဓမ်မကငျြ့ခံရတဲ့ ကောငျမလေးရဲ့နာမညျကို ဖျောပွခွငျးမပွုဖို့ တရားရုံးက တားမွဈထားပွီး၊ သူမ အဓမ်မကငျြ့ခံရတဲ့ ဗှီဒီယိုဖိုငျကို ဆိုရှယျ App ဖွဈတဲ့ Periscope မှာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီလက ဖွနျ့ဝခေံခဲ့ရပါတယျ။ ဒီဗှီဒီယိုကို Lonina က မိမိဖုနျးနဲ့ စိတျကွိုကျရိုကျကူးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အဓမ်မကငျြ့ခံရသညျ့ ကောငျမလေးက အခုဆို အသကျ 18 နှဈ ပွညျ့ပါပွီ။ သူမက ” ကြှနျမရဲ့ အားနညျးခကျြက လူတဈ
ယောကျကို ခဏခငျြးမှာပဲ အပွညျ့အဝ ယုံကွညျမိတာပဲ … သူတို့က ဒီအခကျြကို ကောငျးကောငျးအသုံးခသြှားတာပါ “လို့ မကျြရညျစကျလကျနဲ့ ပွောပါတယျ။ အဓမ်မကငျြ့ခဲ့တဲ့ အသကျ 29 နှဈအရှယျ အမြိုးသား Raymond B. Gates ကိုလညျး ထောငျဒဏျ9နှဈ ခမြှတျထားပွီးပွီလို့ သိရပါတယျ။
တရားခံ Lonina အပါအဝငျ အဓမ်မကငျြ့ခံရသညျ့ ကောငျမလေးတို့ဟာ Gates နဲ့ ခငျတာ မကွာသေးဘဲ၊ စြေးဝယျထှကျရငျး ဆုံးဆညျးရာကနေ ခငျမငျခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နောကျနမှေ့ာ Gates က သူမတို့နှဈယောကျကို အိမျကို ဖိတျလိုကျပွီး၊ သောကျစားခဲ့ကွပါတယျ။ အဲဒီမှာ အမူးလှနျနတေဲ့ ကာယကံရှငျကို Gates က အဓမ်မကငျြ့ခဲ့ပွီး၊ ဒါကို Lonina က တဟီးဟီးတဟားဟားနဲ့ ဗှီဒီယိုရိုကျကူးကာ အငျတာနကျပျေါကို Live လှငျ့ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။